လက်သုတ်စုံ(အစုံသုတ်) | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
ကျမအမျိုးသားက အသုတ်စုံအလွန်ကြိုက်ပါတယ်။ သူကြိုက်တဲ့အစားအစာဆိုရင်ပြောစရာမလိုပါဘူးနော် ကျမတို့အိမ်မှာခဏခဏလုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။ ကျမလား သူကြိုက်ပြီဆိုမှတော့ ကိုယ်ကလဲအလိုအလျောက်ကြိုက်သွားရတာပေါ့ရှင်။လက်သုတ်စုံ က ရှိသမျှအကုန်ထဲ့သုတ်တဲ့သဘောမို့ အစုံသုတ်လို့ခေါ်ပုံရပါတယ် ရန်ကုန်အိမ်မှာဆိုရင် ကျမ မမကြီးက အသုတ်ဆိုအလွန်ကြိုက်ပါတယ်။ နေလည်စာများအိမ်မှာစားကြပြီဆို မမကြီး အမြဲလိုလို အသုတ်မှာလေ့ရှိပါတယ်။ အသုတ်စုံစား ရင်းမိသားစုကိုလဲလွမ်းရင်းပေါ့နော်။
-ဂျုံခေါက်ဆွဲ ၃၀ ဂရမ်( ၁၅ကျပ်သားခန့်)
-မုန့်ဖတ် ၃၀ ဂရမ်( ၁၅ကျပ်သားခန့်)
-ပဲကြာဇံ ၃၀ ဂရမ်( ၁၅ကျပ်သားခန့်)
-ပဲပင်ပေါက် ၂၅ ဂရမ်( ၁၀ကျပ်သားခန့်)
-ဂေါ်ဖီထုပ် ၃၀ ဂရမ်( ၁၅ကျပ်သားခန့်)်
-ပဲပင်ပေါက်၂၅ ဂရမ်( ၁၀ကျပ်သားခန့်)
-သင်္ဘောသီးစိမ်း ၂၅ ဂရမ်( ၁၀ကျပ်သားခန့်)
-သခွါးသီး ၂၅ ဂရမ်( ၁၀ကျပ်သားခန့်)
-ထမင်း လက်တဆုပ်စာ ၇-၈ လုံးခန့်
ငရုတ်ဆီကိုထမင်းမှာလူးနယ်ပြီး လက်တဆုပ်စာအလုံးလေးများလုံးထားပါ။ အသုတ်တပွဲကို တလုံးထဲ့သုတ်ရန်အဆင်သင့်အောင်ပါ။ အာလူး၊ ပဲပင်ပေါက် တို့ကိုပြုတ်ထားပါ။ ပဲကြာဇံ၊ ခေါက်ဆွဲ၊ မုန့်ဖတ်တို့ကိုပြုတ်ထားပါ။ သင်္ဘောသီး၊ သခွါးသီး၊ ဂေါ်ဖီတို့ကို ပါးပါးလှီးထားပါ။ ကျောက်ပွင့်ကိုရေစိမ်ပြီး လှီးဖြတ်ထားပါ။ ပဲပြားကို ကြော်ပြီးပါးပါးလှီးထားပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဗန်းတခုထဲတွင် စီရီပြင်ဆင်ထားပါ.
အသုတ်အတွက်လိုအပ်သည်များ ဖြစ်သောငရုတ်ဆီ(ငရုတ်သီးဆီသတ်)၊ ပဲမှုန့်အကျက် ၊ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် ၊ ကြက်သွန်အနီဆီချက်၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်၊ ငံပြာရည်၊ ငရုတ်သီးလှော်မှုန့်၊ မကျည်းမှဲ့ရည် တို့လဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါစေ။
အသုတ် သုတ်မဲ့ဇလုံးထဲသို့ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အနဲငယ်စီစုံအောင် ထဲ့ပြီး ဆီချက်၊ ပဲမှုန့်၊ ငံပြာရည်၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ ငရုတ်သီးလှော်၊ မကျည်းမှဲ့ တို့ကိုလိုသလိုချဉ်ငံစပ်မွမ်းမံကာ နှံ့စပ်အောင်နယ်ပြီး ပန်းကန်တခုတွင်တည်ခင်းပြီး ဟင်းခါးပူပူနှင့် တွဲဖတ်စားသုံးနိုင်ပါပြီ။ (ချဉ်ငံစပ်အကြိုက်က တယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်မှာမို့ ဘယ်လောက်စီထဲ့ဖို့မရေးပေးတာပါ)
11 comments on “လက်သုတ်စုံ(အစုံသုတ်)”
22/02/2013 @ 3:21 am
kyar zan thoke recipe plssssh 🙂
22/02/2013 @ 3:28 am
it will be very similar , anyway when i will do it i will post it naw veryy soon 🙂
22/02/2013 @ 3:25 am
thank you naw aye myat lay 🙂
22/02/2013 @ 3:26 am
good.. I like very much. sis
22/02/2013 @ 4:37 am
Love it so much.Look so good.
22/02/2013 @ 12:25 pm
thanks Kham 🙂
23/02/2013 @ 1:12 am
23/02/2013 @ 1:52 am
24/02/2013 @ 11:54 am
13/01/2014 @ 10:13 am
စားချင်တယ် စားချင်တယ် အီး ဟီး ဟီး အခုချားမယ်
LeaveaReply to Myat Cancel reply